Zithini iimpahla? Iingcamango eziphambili | Ezezimali
Iimpahla zihambelana nazo zonke ezo zinto izinto eziphathekayo okanye ezingenako ukuthengwa okanye ukuthengiswaOko kukuthi, kuthengiswa. Ngamanye amaxesha ukubhekisa kwimpahla igama lempahla linokusetyenziswa, zombini zisemthethweni kwaye ziyafana. Iimpahla zithathwa njengempahla yezoqoqosho ngenjongo yokuba zinokuthengiswa. Zihlala ziyinxalenye okanye iyonke yenxalenye yezoqoqosho apho ziphuhliswa zaza zatshintshwa. Kungenxa yolu hlobo abathengi kunye nabathengisi bezinto zokuthengisa bathengisa ubudlelwane babo bezorhwebo kunye nokutshintshiselana ngokwemvelo kunye nomdla abanalo. Le nzala inokuvela kwiimpawu zentengiso uqobo okanye iinjongo ezilandelwa ziinkampani.
Isakhono sokulunga esinokurhweba senza ukuthengiswa kuthathelwe ingqalelo njengempahla evuselela urhwebo kunye nokwenza uqoqosho lusebenze. Babandakanya zonke izinto ezibonakalayo ezinje ngezinto ezingavuthiyo (ubhedu, i-oats, isinyithi ...) okanye iimpahla ezingezizo ezomzimba (amalungelo awodwa omenzi wechiza, iilayisensi, kunye nezabelo zenkampani) Ixabiso lentengiso linokutshintsha ngokuhamba kwexesha kwaye njengoko kunokubonwa kumaxabiso abo. Izinto ezinokuba nefuthe kubo zihlala zinemeko yemarike ngelo xesha. Ukwazi ukuba zeziphi izinto ezinefuthe kumaxabiso abo, ukuba zinokuchaphazela ukuya phezulu okanye ezantsi okanye ngokubaluleka kwenkampani, qhubeka ufunda. Inqaku lanamhlanje lenzelwe ukuba lijongisise iimpahla kwaye liqonde ngokupheleleyo kwiindawo ezahlukeneyo zokujonga kunye nezinto abanomdla kuzo.
1 Izinto ezichaphazela ixabiso lempahla
2 Iimpahla ngokuxhomekeke kumbono weshishini
2.1 Kuxhomekeke kwisikhundla seshishini
Izinto ezichaphazela ixabiso lempahla
Ixabiso lempahla lingahlala liphezulu okanye libiza kancinane, kodwa kumaxa amaninzi amaxabiso azo aya kutshintsha ngokuhamba kwexesha. Konke oku kuya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo ezingenelelayo kuzo. Eyona ibalulekileyo iya kuba yile ilandelayo:
Ngenxa yobuninzi bayo. Ezo zinto zithengiswa kancinci zihlala zibiza kakhulu njengoko zimbalwa kwaye zixabiseke ngakumbi. Ukuba ikwayintengiso ebalulekileyo ekwenziweni kweemveliso ezithile kwaye ayinazinto zizibambeleyo, ibangela ukuba ixabiso lenyuke nangakumbi. Ngokuchasene noko, ukuvelisa okuncinci okanye inzala kwintengiso iya kubangela ukuba ixabiso layo lehle njengoko kukho imfuno encinci. Iya kubala ukufumaneka kweempahla zizonke. Umzekelo, i-palladium (esetyenziselwa umzekelo kwiziguquli ze-catalytic) inqabile kwaye ixabiso layo liphezulu, ngelixa amanzi eninzi kakhulu kwaye ixabiso lawo liphantsi.
Ukuba banokubambela. Ngokuhambelana noku kuchazwe apha ngasentla. Ukuba iimpahla zibalulekile ekwenzeni, ukucacisa okanye ukuthengisa ngenxa yeempawu zazo, zihlala zinexabiso eliphezulu. Ngokukodwa ukuba ezinye iimpahla azinakusetyenziswa ngenxa yeempawu zazo, loo nto iyodwa ibenza baxabiseke. Umzekelo igolide. Ukuba, ukongeza, kulunge into entsha enokuthi ithengiswe, ekwavelise iimfuno ezininzi, kwaye inokwenziwa kuphela ngegolide, oko kungadala ukuba ixabiso lenyuke nangakumbi.
Ekhethekileyo. La malungelo okwexeshana ahlala enikezelwa kumalungelo awodwa omenzi wechiza okanye kwiimpawu zorhwebo. Ezi zithintelo kwintengiso yeempahla okanye iinkonzo zenza ukuba ezo mpahla zikonyuse okanye zehle kwixabiso. Umzekelo, ilayisensi inokusebenza iminyaka embalwa, njengepatent, kwaye ke unike 'amandla simahla'.
Amalungiselelo asetyenzisiweyo. Ixabiso lempahla linokuxhomekeka ekuthuthweni, ekugcineni, kwindawo evela kuyo, njl. Lonke olu lwakhiwo kunye nolungiselelo lokuthengisa kunye nabo lunokunyusa ixabiso ngokuxhomekeke kwindawo yokugqibela yeshishini. Kukho ixesha apho, ngokuxhomekeke kwiimpawu kunye nexabiso lezinto ezithile, iinkampani zinokukhetha ukuguqula isicwangciso-qhinga sabo ukuba zinokufuna okuninzi okanye kancinci kwimisebenzi yabo yezoqoqosho. Oku kusizisa kwinqaku elilandelayo.
Iimpahla ngokuxhomekeke kumbono weshishini
Nokuba iimpahla zinokufakwa kumaxabiso aphezulu okanye asezantsi kuya kuxhomekeka kwizinto ezikhankanywe apha ngasentla. Nangona kunjalo, "igama lokugqibela" lilele ngakumbi kwindlela yeshishini enokuthi inikwe. Ukuthengisa urhwebo kunenzuzo ngakumbi okanye akunjalo kwinkampani, nayo kuya kuxhomekeka kwimida yakho yenzuzo. Ukuba ukufunyanwa kweempahla kuchatshazelwa kakhulu yimvelaphi, inkampani (kwaye ixhomekeke kubungakanani bayo) inokuhamba ukuba ngaba ngale ndlela yenza imveliso yayo isebenze ngakumbi kwaye inenzuzo. Ngokuchasene noko, ukuthengiswa kweemveliso zakho okanye ukuthengiswa kunokuchaphazeleka okanye kuvuzwe, kuxhomekeke kubunikezelo bokusasazwa kwayo. Ukuthatha isigqibo kolu tshintsho lwesicwangciso kuya kuxhomekeka kumbono nakwiinjongo zeshishini ngalinye.
Esi sicwangciso-buchule kunye nombono weshishini unokuza ekuphakamiseni ukuba intengiso ibaluleke kangakanani okanye ayibalulekanga, ukuqhubeka necandelo, okanye ngokuchaseneyo ukuzibuyisela, kuxhomekeke kwinzuzo enokulufumana kwityala lokugqibela. Ikwachaphazela nexabiso elihlawulelweyo kwaye ngenxa yoko ukukhangela ezinye iindlela ezizezinye. Kwimeko enzima kakhulu, ngaphandle komda wokuba ukwazi ukuhambisa enye okanye ezingaphezulu iimpahla ezinexabiso eliphezulu, inkampani kuya kufuneka icace gca malunga nokusebenza kwayo kunye nemodeli yezoqoqosho.
Kuxhomekeke kwisikhundla seshishini
Okokugqibela, ayingawo onke amashishini anikezela ngeemveliso zawo okanye athengise iimpahla zawo ngexabiso elifanayo. Icandelo linokuba namaxabiso amiselweyo (umzekelo lawo ecuba eSpain), kodwa njengomgaqo jikelele inkampani ihlala ibeka ixabiso ngokwalo. Oku kuyakwenza ukuba ngamanye amaxesha ukufunyanwa okanye ukuhanjiswa kwempahla kube kunenzuzo engaphezulu okanye encinci. Ukuba ingeniso iphezulu ngemida yenzuzo ephezulu, umzekelo iApple ngokuthelekiswa nezinye iinkampani ze-smartphone, inegumbi elininzi lokuqhuba.
Omnye umzekelo unokuba ngowenkampani ezinikele ekufunxeni igolide. Ayizizo zonke ezityala uhlahlo-lwabiwo mali olufanayo ukufumana iigun zegolide. Abo mgodini uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lokufumana isixa esifanayo sisezantsi banokubona amaxabiso egolide esiwa kwaye nokuba bebengenanzuzo incinci baya kuqhubeka ukuba. Ngokwahlukileyo, abo kufuneka batyale imali eninzi kwimigodi yegolide baya kuba ngabokuqala ukwenzakala xa bebona ukuba ixabiso lezinto ezingafunekiyo abafuna ukuzihambisa ziyawa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Zithini iimpahla? Iingcamango eziphambili